မိတ်ဆွေစစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » မိတ်ဆွေစစ်	9
Posted by manawphyulay on Jun 17, 2015 in Poetry |9comments
နှစ် လ ဟောင်းက အကြောင်းမလျော်
ကံပစ်ချ၍ နင်က နိုင်ငံခြားရောက်
ငါနဲ့ ကြုံစဉ် မကြည်မျက်နှာ
ငါ မျှော်မှန်းသည် သူငယ်ချင်း…
manawphyu lay has written 929 post in this Website..
I like Design. I am writing blog.
View all posts by manawphyulay →	Blog
aye.kk says: မိတ်ဆွေစစ်ရင်
lu lu says: တွေ့ ဆုံ ကြုံ ကွဲ
တချို့ က ခါးသီးစွာ
တချို့ က ပျော်ရွှင် စွာ
ဘဝ တွေ က စိတ်ပျက်စရာ
ခန လေးမှာ သင့်မြတ် ကြစို့ 
Mike says: .မိတ်ဆွေစစ် ရဖို့ဆိုရင်
.မိတ်ဆွေစစ် လိုပြုမူ ဆက်ဆံဖို့လိုတာပေါ့နော
မြစပဲရိုး says: အဲလို လာကြည့်ခဲ့ရင် ဆက်ပြီး မိတ်ဆွေတော်မနေနဲ့ မနောရေ။
ကိုယ့်ဘက်ကလဲ မျက်မှန်စိမ်းချွတ်ထားဖို့ လိုမယ်။ :-))
Ma Ma says: မိတ်ဆွေစစ်ဆိုရင်ဖြင့် အဲလို အထက်စီးကနေ ဒေါမာန်နဲ့မကြည့်ဘူး။
အဲလိုကြည့်ပြီဆိုမှဖြင့် မိတ်ဆွေစစ် မဟုတ်လို့ပဲ။
အောင် မိုးသူ says: သူငယ်ချင်း
Courage says: မိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာ အဆင့်အတန်းတို့ ဂုဏ်တို့ ငွေတို့ ဘာကိုမှအရေးမလုပ်ပဲ လူကိုသာ ပဓာန သဘောထားတတ်သူတွေပါ။
manawphyulay says: ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။
မိတ်ဆွေ အစစ်အမှန်တိုင်းသည် ဘာမှ မလိုအပ်ပဲ သံယောဇဉ်တစ်ခုတည်းသာ ရှိတတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ်လို့ သိမှတ်ထားမိပါတယ်။
aye.kk says: courageရယ်
အမ်တီရဲ့ မိတ်ဆွေဘဘကြီးရဲ့ သမီးပါပဲ။။။။